Ra’iisal Wasaare Rooble oo Gudoomiyay Shirka Amniga qaranka. – SOMALI RADIO ONAIR
February 23, 2022 nuxur wararka Uncategorized 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddoomiyey shirka Amniga Qaran oo looga hadlayay xooninta amniga Dalka, la dagaalanka Waxa loogu yeero Argagaxisada , dardargelinta sugidda amniga Muqdisho iyo adkaynta amniga Doorashada.
Ra’iisul Wasaaraha dalka ayaa faray hay’adaha amniga in ay xil gaar ah iska saaran sugida amniga caasimadda oo lagu qaban doono doorashadda Guddoonka barlamaanka iyo Madaxweynaha Soomaaliya.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa ku boggaadiyey hay’adaha amniga iyo Taliska AMISOM dadaalada ay wadaan ee lagu ciribtirayo kooxaha dhibaatada ku haya bulshada Soomaaliyeed, waxuna ku adkeeyey in la sii wado howlgallada xoreynta goobaha ay ku sugan yihiin argagixisadu.
Gudiga xalinta Khilaafaadka ee doorashooyinka oo Fasaxay Kuraas hore ay u hakiyeen